अष्ट्रेलियासँग भारतको लज्जास्पद हार! | Hamro Khelkud
अष्ट्रेलियासँग भारतको लज्जास्पद हार!
एजेन्सी – अष्ट्रेलियासँगको पहिलो एकदिवसिय खेलमा घरेलु टोली भारतले लज्जास्पद हार बेहोरेको छ । मंगलबार राती अष्ट्रेलियाले भारतलाई १० विकेटले हराउँदै तीन ओडीआई खेलको सिरिजमा १-० को अग्रता लिएको छ ।
भारतले प्रस्तुत गरेको २ सय ५६ रनको लक्ष्य अष्ट्रेलियाले ३७.४ ओभरमा कुनै विकेट नगुमाई पुरा गर्यो । अष्ट्रेलियाको सानदार जितमा दुवै ओपनर आरोन फिन्च र डेविड वार्नरले उत्कृष्ट शतक प्रहार गरे । वार्नर १ सय १२ बलमा १७ चौका र ३ छक्का सहित१ सय २८ रनमा अविजित रहे ।
३१ ओभरको दोस्रो बलमा वार्नरले जसप्रित बुमराहलाई चौका प्रहार गर्दै ओडीआई करिअरको १८ औं शतक प्रहार गरे । उनले शतक ८८ बलमा पुरा गरेका थिए ।
त्यस्तै कप्तान फिन्च १ सय १४ बलमा १३ चौका र २ छक्का सहित १ सय १० रनमा अविजित रहे । आरोन फिन्चले ३५ औं ओभरको पाँचौ बलमा रविन्द्र जडेजालाई चौका प्रहार गर्दै ओडीआई करिअरको १६ औं शतक पुरा गरेका थिए ।
त्यसअघि मुम्बईको वानखडे रंगशालामा टस हारेर ब्याटिङ थालेको भारत ४९.१ ओभरमा अल आउट हुँदै २ सय ५५ रनमा समेटिएको थियो ।
पाँचौ ओभरको तेस्रो बलमा मिचेल स्टार्कले ओपनर रोहित शर्मालाई डेविड वार्नरवाट १० रनमा क्याच गराए । दोस्रो विकेटका लागि शिखर धवन र लोकेश राहुलले २७.१ ओभर सम्म १ सय २१ रनको साझेदारी गर्दै भारतको इनिङ उकासेका थिए ।
एस्टन अगरले २८ औं ओभरको पहिलो बलमा राहुललाई स्टिभ स्मिथबाट ४७ रनमा क्याच गराउँदै शतकिय साझेदारी तोडे । राहुलले ६१ बलमा ४ चौका प्रहार गरे । २९ औं ओभरको पाचौं बलमा प्याट कमिन्सले शिखर धवनलाई ७४ रनमा अगरबाट क्याच गराउँदै अष्ट्रेलियालाई खेलमा फर्काएका थिए । धवनले ९१ बलमा ९ चौका र १ छक्का प्रहार गरे ।
स्पिनर एडम जम्पाले ३२ औं ओभरको दोस्रो बलमा कप्तान विराट कोहलीलाई १६ रनमा कट एण्ड बोल्ड आउट गरेपछि भारत संकटमा परेको थियो। लगातै ३३ औं ओभरको पाचौं बलमा स्टार्कले श्रेयस ऐरलाई ४ रनमा एलेक्स करिबाट क्याच गराए । केन रिचड्सनले रबिन्द्र जडेजालाइ करिबाट २५ रनमा क्याच आउट गराए । जडेजाले ३२ बलमा २ चौका र १ छक्का प्रहार गरे ।
४४ औं ओभरको दोस्रो बलमा कमिन्सले विकेटकिपर ऋषभ पन्तलाइ २८ रनमा एस्टन टर्नरबाट क्याच गराए । पन्तले ३३ बलमा २ चौका र १ छक्का प्रहार गरे । शार्दुल ठाकुर १३, मोहम्मद शामी १० र कुलदिप यादवले १७ रन बनाए ।
अष्ट्रेलियाका तीब्र गतिका बलर मिचेल स्टार्कले १० ओभरमा ५६ रन खर्चेर ३ विकेट लिए । प्याट कमिन्सले १० ओभरमा १ मेडन सहित ४४ रन खर्चेर २ विकेट लिए । केन रिचड्सन २, एडम जम्पा र एस्टन अगरले १-१ विकेट लिए । दोस्रो वान डे खेल शुक्रबार राजकोटमा हुने छ ।